थबाङको सुधारिएको शिक्षा, जिल्लाकै उत्कृष्ट || Postpati : News For All
थबाङको सुधारिएको शिक्षा, जिल्लाकै उत्कृष्ट
कहाँ होला थबाङको जनवादी बिद्यालय ?
केबी गुरुङ २०७६ असार १५, आईतवार प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : 8 मिनेट
केबी गुरुङ/असार १५, रोल्पा । रोल्पाको उत्तरी भागमा रहेको जलजला पहाडको काखमा अबस्थित छ ‘थबाङ’ । साबिकको सदरमुकाम लिबाङ देखि २८ कोष (करिब ६८ किलोमिटर) दुरीमा पर्छ ।
एकीकृत बसोबास थबाङ्गेहरुको पुरानो बिशेषता हो । उनीहरुको एकीकृत बसाई हेर्दा लोभै लाग्दो देखिन्छ । बस्तिको नजिकै एउटा सामुदायिक विद्यालय छ । उक्त बिद्यालयको नाम ‘श्री वीर बलभद्र माध्यामिक विद्यालय’ हो । सो बिद्यालय २०१५ सालमा स्थापना भएको थियो ।
राजनीतिक रूपमा चर्चित ‘थबाङ’ विकास, पूर्वाधार, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पछाडि परेको मानिन्छ । शैक्षिक सूचकांकमा पनि थबाङ तल मानिदै आएको थियो ।
तर यसपाली भने थबाङमा रोल्पा जिल्लाकै सुधारीएको शिक्षा भेटिएको छ । थबाङको वीर बलभद्र बिद्यालयले एसईईमा रोल्पाका अन्य बिद्यालयहरु भन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिएको छ । रोल्पामा हालसम्म एसईईमा ग्रेड ‘ए प्लस’ नतिजा भेटिएको थिएन । तर थबाङले यसपाली त्यो नतिजा दिलाएको छ ।
शिक्षामा अगाडी थबाङ
सामुदायिक विद्यालय श्री वीर बलभद्र माध्यामिक विद्यालय, थबाङका दुई विद्यार्थीले माध्यामिक शिक्षा परिक्षा (एसईई)मा ए प्लसको नतिजा ल्याएर जिल्लाबाटै ए प्लस दिलाउने पहिलो स्कुलको रेकर्ड बनाएको छ ।
उक्त सामुदायिक बिद्यालयमा अध्यानरत नेत्रज्योती रोका र चिरञ्जीवी पुनले ए प्लस ल्याएका हुन् । यो नतिजा सँगै थबाङले शैक्षिक क्षेत्रमा पनि नयाँ इतिहास बनाएको छ ।
रोल्पाबाट बिगतका बर्षहरुमा नीजि तथा अन्य कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयहरुले ए प्लसको नतिजा दिन सकेका थिएनन । सामुदायिक विद्यालय तर्फ जिल्लाभरबाट ए प्लस नतिजा ल्याएको यो पहिलो रेकर्ड हो ।
थबाङबाट एसईईमा ३३ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । त्यस मध्ये २ जनाले ए प्लस, ७ जनाले ए, ३ जनाले बी प्लस, ७ जनाले बी, १२ जनाले सी प्लस र २ जनाले सी ग्रेड ल्याएका छन् ।
२०१५ सालमा स्थापना भएको वीर बलभद्र माध्यामिक बिद्यालय थबाङमा बालविकास अन्तर्गत मन्टेश्वरी, नर्सरी, केजी देखि कक्षा १२ सम्म अध्यन अध्यापन हुन्छ ।
त्यसैगरी कक्षा १ देखि ५ सम्म बिद्यार्थीको चाप बढेपछि दुइ सेक्सनमा अध्यन हुन्छ । अन्य कक्षाहरुमा एक/एक सेक्सनमा अध्यन अध्यापन हुन्छ ।
विद्यालयमा कृषि, वनलगायत प्राविधिक विषयको पढाइ हुँदै आएको छ ।
मन्टेश्वरी देखि कक्षा ११ सम्म अंग्रेजी मिडियाम लागु भएको छ । आगामी बर्ष देखि कक्षा १२ मा पनि अग्रेजी माध्यमबाट अध्यन हुने बिद्यालयका प्रधानाध्यापक कुल बहादुर ओलीले बताए ।
नेपाली पढ्न चाहाने बिद्यार्थीहरुका लागि कक्षा ९ देखि नेपाली माध्यामबाट (ऐच्छिक) पठन पाठन हुने ब्यबस्था पनि गरिएको छ ।
बिद्यालयमा सबै ३६ जना शिक्षकहरु रहेका छन् । जसमध्ये कम्तिमा १० जना शिक्षकहरु निजि स्रोतबाट ब्यबस्थापन गरिएको छ भने अन्य स्थाई तथा अस्थाई शिक्षकहरु रहेका छन्।
हाल बिद्यार्थी संख्या ७ सय २७ जना भर्ना भएका छन् भने कक्षा ११ का बिद्यार्थीहरु अझै भर्ना हुन बाँकी रहेको प्रधानाध्यापक ओलीले बताए ।
एसईई दिनु पुर्ब बिद्यार्थीहरुलाई तयारि कक्षाहरुको ब्यबस्थापन गरिएको थियो । कक्षा १० का एसईई दिने बिद्यार्थीहरुलाई ६ महिनासम्म अनिवार्य होस्टेलको ब्यबस्थापन समेत गरिएको प्रधानाध्यापकले बताए ।
आगामी दिनमा यो भन्दा अझै राम्रो नतिजा ल्याउनेमा प्रधानाध्यापक ओली ढुक्क छन् । उनले भने, बिद्यार्थीहरुको पठन पाठनको बलियो आधार भनेको बालविकास हो । बालविकासलाई राम्रो संग सुधार गरीए माथिका कलासहरुको बेस त्यसै राम्रो बन्दै जान्छ । त्यसैले अहिले हाम्रो बिद्यालयमा बाल बिकाशलाई सबै भन्दा राम्रो सुधार गरेका छौ, बालविकासमा पुरै मन्टेश्वरी पद्दति छ । यसको परिणाम अझै राम्रो देखिने छ ।’
प्रधानाध्यापक कुल बहादुर ओली र बिब्यस अध्यक्ष अजय घर्ति
बिब्यस अध्यक्ष स्कुलमा बेतलवी दैनिक हाँजिरी हुन्छन
प्रधानाध्यापक कुल बहादुर ओलीले बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष अजय घर्तिको खुलेर तारिफ गरे । बिद्यालय बन्नुमा अभिभाकको कुशल भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिंदै बिर बलभद्र बिद्यालयले राम्रो अध्यक्ष पाएको छ ओलीले भने । हामी तलबमा जोडिएका छौ तर उहाँ बेतलवी प्रत्यक दिन स्कुलमा हाँजिर हुनुहुन्छ । बिद्यालय ब्यबस्थापनमा सुधार हुनुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो ।
ओलीले थपे कतिपय शिक्षकहरुको हाँजिरी भन्दा अध्यक्षको धेरै होला ! प्राय उहाँको समय बिहान र साँझ बिद्यालयमै बित्छ । हामी बीच भौतिक निर्माण देखि शैक्षिक ब्यबस्थापन बिषयमा अधिकतम छलफल र सहकार्य हुँदै आएको छ ।
प्रधानाध्यापक कुल बहादुर ओली युवा शिक्षक हुन् । उनले अहिले तेस्रो कार्यकाल सकाएर चौथो कार्यकाल चलाई रहेका छन् । कुशल र परिपक्व नेतृत्वका कारण थवाङ्गबासिहरु उनीप्रति बिश्वस्त देखिन्छन । स्थानीय दल बहादुर रोकाले भने हामीले क्षमतावान कुशल प्रधानाध्यापक पाएका छौ । सबै संग समन्वय गर्न सक्ने उहाँको खुबी रहेछ । स्कुल ब्यबस्थापनमा नेतृत्व दाई भूमिका पनि प्रदान हो उनले भने ।
शिक्षा सुधारमा एकरुपता
थबाङले यसपालिको शैक्षिक परिणाम ल्याउनुमा १० बर्ष सम्मको त्याग तपस्याले सम्भब भएको बिद्यालय ब्यबस्थापन अध्यक्ष अजय घर्तिले पोष्टपाटीलाई सुनाए । बिगत १० बर्ष देखि प्राबिधिक बिद्यालय ब्यबस्थापनमा जुटेको परिणामले राम्रै नतिजा दिएकोमा खुसि समेत व्यक्त गरे ।
अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यन अध्यापन गराइएका बिद्यार्थीहरुको यो पहिलो ब्याज हो । उनले बिगतको तितो अनुभबलाई सुनाउदै भने, ‘माओवादी आन्दोलन बिगठनपछि खण्डित भएका बिचारहरुको प्रभाबले होला केहि साथीहरु थबाङ्गमा बोर्डिंग खोल्न तिर लागे । तर अधिकांस समुदाय सामामुदायिक बिद्यालय सुधारमा लाग्नु पर्छ भन्नेमा एकमत रह्यो । हामीले हाम्रा बालबच्चाहरुलाई पनि यहि स्कुलमा पढायौ । बरु स्थानीयहरु मिलेर सामुदायिक विद्यायलयलाई बनाउनुको बिकल्प नभएको निस्कर्ष सहित २०६५ सालमा अंग्रेजी माध्यामलाई मध्यनजरगरि प्राबिधिक बिद्यालय बनाउन पहल थाल्यौ । अभिभाबकहरुको पनि अग्रेजी पढाइ प्रति रुचि देखिएपछि सरकारी बिद्यालयमै अंग्रेजी माध्याम लागु गरेका हौ ।’
उनले स-विस्तार गरे, ‘माओवादीहरुको विभाजन पछि सामाजिक रुपमा केहि मतभिन्नताहरु उत्पन्न भएपनि शैक्षिक ब्यबस्थापन बिषयमा भने थबाङ्ग हिजै देखि एकरुप हुँदै आयो । भिन्न राजनीति र भिन्न बिचारका नेता देखि कार्यकर्तासम्म शिक्षा बनाउने सवालमा एकमतमा उभिए, वीर बलभद्रको शैक्षिक ब्यबस्थापनमा शन्तोष बुढा देखि अन्य हालका स्थानीय नेताहरु एकमतका साथ् लागि परेकोले यो सम्भब भएको हो, घर्तिले भने, ‘विभाजित राजनीतिको कारण थबाङ्गमा फरक मतहरु जन्मिए पनि स्कुल ब्यबस्थापन बिषयमा अहिलेसम्म एकमत भेटिएको छ, सायद शिक्षामा सन्तानहरुको भबिस्य जोडिएर होला ।’
बाबा हिरासत, छोरीको ए-प्लस
नेत्रज्योती रोकाले एसईईमा एप्लस ल्याईन । उनका बाबा जयप्रकाश राेका ‘प्रताप’ यतिबेला हिरासतमा छन् । उनि नेत्र बिक्रम चन्द ‘विप्लब’ नेतृत्वको नेकपा रोल्पाका इन्चार्ज हुन् ! उनलाई यसअघि प्रहरीले गिरफ्तारगरि लिबाङ्ग हिरासतमा राखेको छ ।
प्रतिबन्धित (नेकपा) रोल्पा इन्चार्ज रहेका रोका त्यस बिद्यालयको शिक्षक अभिभाबक संघको अध्यक्ष समेत रहेका छन् । बिद्यालय ब्यबस्थापनमा उनले पनि निकै राम्रो भूमिका निर्बाह गरेका छन् अध्यक्ष घर्तिले भने ।
त्यसैगरि अर्का एसईईमा एप्लस ल्याउने चिरिन्जीबी पुनका बाबा धपलाल पुन पनि बिगतको जनयुद्दमा सहभागी व्यक्ति हुन् । उनको अधिकांस जिबन राजनीतिमा बितेको छ ।
थबाङ्गमा नजिकै एउटा बोर्डिंग स्कुल रहेको छ । कक्षा ८ सम्म संचालनमा आएको छ । पहिले ४ सय हाराहारीमा बिद्यालय थिए तर सामुदायिक बिद्यालयको ब्यबस्थापन गरे देखि बोर्डिंग छोडेर बिद्यार्थीहरु सरकारी बिद्यालयमा आउन थालेको अध्यक्ष घर्तिले बताए । अहिले उक्त बोर्डिंगमा बिद्यार्थी संख्या घटेर २ सयको हाराहारीमा आएको छ । यो क्रम अझै घट्ने स्थानीयको बुझाइ छ ।
बिकट ग्रामिक क्षेत्र थबाङ्ग सामुदायिक बिद्यालयबाट यसपाली एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा पाएको भन्दै स्थानीय दल बहादुर रोकाले खुसि व्यक्त गरे । बिद्यालयका भाइबहिनीहरुको नतिजाले रोल्पा जिल्लामै शैक्षिक सुधारमा पहिलो रेकर्ड बनाएको सुन्दा उनले खुसि व्यक्त गरेका हुन् । शैक्षिक सुधारमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक परिवार, ब्यबस्थापन समिति र स्थानीय समुदायको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको रोकाले बताए ।
थबाङको नमुना बिद्यालय योजना खोसेर अन्तै लगियो
यसअघि राज्यले ल्याएको नमुना बिद्यालय कार्यक्रम माप दण्डको आधारमा थबाङ अगाडी हुँदाहुँदै राजनीतिक चलखेलका कारण पाउनु पर्ने योजना अनेत्रै पारिदिएको अध्यक्ष घर्तीले गुनासो पोखे । उनले भने कुन नेताले लर्काए नामै नभनौ तर चलखेल गरेर बिगतको नमुना बिद्यालय योजना रांकोट लगिएको हो।
यो ब्यबस्थामा पनि उस्तै चल्दो रहेछ, नमुना छनौट मापदण्डका आधारमा हाम्रो बिद्यालय अगाडी हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक पावर लाएर, हामीले पाउनु पर्ने योजना अन्तै दिए । आज ति सबै भ्रमहरु चिरेर सत्य छर्लंग भएको छ, त्याग तपस्याको परिणाम अरुले नदेखे पनि समयले देखाई दिन्छ, अध्यक्ष अजय घर्तिले भने ।
यसपाली पनि राज्यले नमुना कार्यक्रम ल्याएको छ । फेरी पनि कतै यस्तै चलखेल भएन भने पाउछौ कि भन्ने आशा मात्रै हो तर ढुक्क हुने स्थिति भने छैन उनले सुनाए । अहिले थबाङप्रति सकारात्मक भएर आउनु भएको छ, थबाङको शैक्षिक ब्यबस्थापनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै नेताहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ, सायद यसपाली नमुना बिद्यालय योजना पाउछौ कि ! घर्तिले केहि आशाहरु व्यक्त गरे ।
दन्द्वको उत्कर्ष ताका रोल्पाको थबाङमा जनवादी बिद्यालय खोलिएको थियो । सो बिद्यालयको नाम ‘सहिद स्मृती नमूना विद्यालय’ राखिएको थियो।
तर ब्यबस्थापनमा कठिनाई देखिएकै कारण शान्ति प्रक्रियापछि जनवादी विद्यालय स्थानीय सामुदायिक बिद्यालय वीर बलभद्र माध्यामिक बिद्यालयमा गाभियो । २०६८ सालमा उक्त बिद्यालय मर्ज भएपछि तत्कालिन जनबादी बिद्यालयका प्रधानाध्यापक लाल चन्द्र रोकाले हाल सोहि वीर बलभद्र बिद्यालयमा पढाइ रहेका छन् ।
जनयुद्धताका नेता कार्यकर्ता, जनसेना, सहिद, घाइते, अपाङ्ग परिवारका छोराछोरीहरुलाई शिक्षा दिलाउने उद्देश्यले माओवादी शिक्षा विभाग अन्तर्गत जनबादी बिद्यालयहरु खोलिएका थिए । हाल केहि जनबादी बिद्यालयहरुको अवशेष समेत मेटिन थालेका छन्।
बिद्यालयको सारथि अगष्ट मोल्नार अक्षकोष
एक जना अमेरिकी नागरिक डा. अगष्ट मोल्नार २०३६ साल तिर थबाङ पुगेका थिए । उनले थबाङमा बसेर त्यहाँको स्थानीय संस्कार-संस्कृति बिषय अध्यन तथा अनुसन्धान गरे । त्यस क्षेत्रको संस्कार र संस्कृतिबारे अध्यन गरेर त्यहिबाट पिएचडी समेत गरेका थिए । त्यसैले आफुले अध्यन गरेको क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले थबाङको बिद्यालयलाई बार्षिक करिब ७ लाख बराबरको सहयोग अनुदान दिंदै आएका छन् ।
यसरि बार्षिक आउने अनुदान रकम र स्थानीयको सक्रियतामा आर्थिक सहयोग जम्मागरि ५० लाखको कोष बिस्तार भएको छ । उक्त अक्षकोषबाट निजि स्रोतका शिक्षकहरुको ब्यबस्थापनका साथै बिद्यालयले आबस्यक भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दै आइरहेको छ ।
स्थानीय अभिभाबकहरुले बिद्यालयलाई आबस्यक पर्ने फर्निचर र शैक्षिक सामाग्रीहरु बार्षिकरुपमा चन्दा स्वरुप सहयोग गर्दै आएको अध्यक्ष घर्तिले जनाएका छन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली र ब्यबस्थापकीय प्रणालीको मात्रै भर पर्ने हो भने शैक्षिक सुधार हुन नसक्ने उनले दाबि गरे । त्यसका लागि चन्दा उठाएर भएपनि बिद्यालय ब्यबस्थापन गर्नुपरेको बताए । नेपाल सरकारले सरकारी बिद्यालयहरु चलाउने तवर तरिकाले मात्रै नमुना बिद्यालय नबन्ने समेत दाबि गरे ।
उनले भने यो हाम्रो गुणात्मक सुधार होइन कोसिस मात्रै हो । अझै धेरै गर्नु छ । यसका लागि स्थानीय अभिभाबकहरु एकजुट भएका छौ ।